Oromo News 06.09.21 | KWIT
Deparmantiin mana fayyaa Iowa hojistoonni hojattoota isaani talaali corona virus kana irrati laaludhaan dhooysan fayyadamuu nidanda’an jechuudhan website state akka dhoogga jiru himan.
Nama lamaa hojattoota mana hidhaa lama kan ajjeesan jedhamuun kan himataman keessa namni tokko akka himanitti itti baname himan. Hojattooni waliin mari’atan jijiirama bakka irrati eega walii galan booda waldorgommiin Thomas woodard’s June 22nd Lin County kan jalqabu akka tae himan.
Woodard fi Michael Dutcher lachuu County Jones kan argamu mana hidhaa Anamosa State iraa bahuudhaf Nurse achi keesa hojattu takkaa fi itti gaafatama manahidhaa ajjeesani jedhani jiran.
Kaartaa haarawa boru bakka gogiinsa America tti wayta gad dhiifamuu haali gogiinsa Iowa mara keessati akka uumamuu fi akka babal’atuu mullisa. Ammati kan itti fufaa jiru hooa fi gogiinsi akka laga Missouri miidhu dandau himan.
Manni murtii mana hidhaa haaroyni fi seera kabachiisan baka kafaluudhaf filattooni Clay County guyyaa kaleessa Million $41 waaye bond irrati akka kufaa tau godhe.
Akka result unofficial tti state taaf 2-1 margin hin taanef, jiraattoni County 1,544 kan morman yoo tau namni 766 filatanii jiru. Waaye Bond aka taruudhaf harka caalma muraasa barbaachisa ture. County Vermillion keessati ijaarsa mootuma haarawa ijaaru barbada ture. Deegartooni isaa akka jedhanitti yeroo mana murtii ammaa qaali kan irra darbee waan taeef ijaarsi akka barbaachisu himan.
Measure warri faala akka manni murtii seena akka dhaabatu arguu fedhan.